La Cabaña Rinconcito de Cabañas Gemelos - I-Airbnb
San Agustinillo, Oaxaca, i-Mexico
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Mario Y Margarito
U-Mario Y Margarito Ungumbungazi ovelele
I-La Cabaña Rinconcito, eqhele ngamamitha ambalwa ukusuka ogwini, inemibhede engu-2 ephindwe kabili, izindlu zokulala, i-WIFI, amanzi ahlanzekile, ikhishi layo elihlomele, ifriji, kanye negumbi lokugezela langasese. Ezungezwe izihlahla, izilwane nezinyoni zazo, umuntu uzizwa eyingxenye yemvelo. Uma uthanda ukukhempa, le ndlu ye-rustic enophahla lwentende izoba ngeyakho. Ikamelo lokulala linenethi yomiyane phezu kombhede walo othokomele, kanye nombhede ongaphansi endlini yokuphumula. Kunombono wolwandle ukusuka kuma-hammocks egumbini lokuphumula.
I-La Cabaña Rinconcito iqukethe ama-palapas amabili endabuko anophahla lwesundu, igumbi lokulala kanye negumbi lokuhlala / ikhishi. Ahlukaniswe kahle namanye amakhabethe e-Cabañas Gemelos ukuze abe yimfihlo kakhulu. Kunezinhlobo eziningana zezinyoni nezilwane ezincane ezifana nama-armadillo, ama-opossums, ama-skunk, nama-iguana kulabo abathanda imvelo. Indawo ikhethekile ngokuthula nokuthula, kodwa uma uzwa sengathi "ukwenza" idolobha alikude kangako (imizuzu engu-12 uhamba ngolwandle).
1 umbhede wosofa, imibhede yenetha engu-2
4.94 · 114 okushiwo abanye
Uhambo lwemizuzu eyi-10 nje ogwini lolwandle bafika e-San Agustinillo lapho bethola khona izindawo zokudlela, amabha, ukuvakasha ngezikebhe, abangani abavela kuzo zonke izindawo futhi ikakhulukazi abantu abanobungane besifunda. Ngokujwayelekile kuphephile ukugeza khona kodwa unake ama-lifeguards ngoba kwesinye isikhathi imisinga iyingozi. Ngemva kwemizuzu engu-20 bafika eMazunte neTurtle Museum yayo edumile, umculo nokunye okuthakazelisayo nokuzijabulisa.
Ibhishi laseZipolite liyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka lapha ngetekisi. Futhi uma ufuna ukwazi amanye amadolobha, njengePluma Hidalgo ezintabeni, kulula. Kuhlale kunemicimbi emadolobheni omdabu. Nokho, izinto eziningi ezithakazelisayo ziseduze lapha.
Ibungazwe ngu-Mario Y Margarito
Uma sekuhlalwe i-cabin ingeyakho. Asingeni ngaphandle kwemvume noma esimweni esiphuthumayo kuphela. Yingakho singakwenzi ukuhlanza nsuku zonke ukuze sihloniphe ubumfihlo bakho.
UMario Y Margarito Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- San Agustinillo namaphethelo